Ministera Internet - Directories
Ny lisitry ny lahatahiry ataonay dia natao manokana ho an'ny fiangonana an'i Kristy ary tsy misy hafa. Tsy hitanisa ireo fiangonana izay mampiasa fitaovana enti-mozika amin'ny fotoam-pivavahany, ary raha mampiasa ny anarana hafa ny fiangonanao dia aza asiana lisitra eto.
Alohan'ny hamoahana ny fampahalalana momba ny fiangonanao na ny fanavaozana dia tsy maintsy mila sonia ny "Account Account" ianao. Izany dia ahafahanao miditra amin'ny fampidirana ny fampahalalànao ao amin'ny kongregasiona ao amin'ny lisitra misy anay matetika raha ilaina. Ny saram-panompoana isan-taona amin'ny $ 29 (USD) dia ilaina. Rehefa mandray ny fandoavam-bola ianao, dia afaka mametraka ny angon-drakitra ao amin'ny "Directory of Worldwide Churches of Christ" sy ny "Churches of Christ Online Directory" (fiangonana miaraka amin'ny tranokala) tsy misy fandaniana fanampiny mandritra ny taona.
Azonao atao ny mandoa vola amin'ny "Account Login" miaraka amin'ny karatra debit na carte de crédit. Ny Minisiteran'ny aterineto dia mampiasa mpizara azo antoka amin'ny alàlan'ny PayPal.com.
Ny fandoavanao dia hanampy antsika hanohy izany fanompoana sarobidy izany ho an'ny fiangonan'i Kristy amin'ny alalan'izao tontolo izao.
Enga anie Andriamanitra hitahy anao, ary hisaotra anao noho ny fampidiranao ireo angon-dalan'ny fiangonanao ao amin'ny "Worldwide Directory of Churches of Christ" ary ny "Church of Christ Online Directory".
Afaka manampy isika. Ny tranonkala tranokala ao amin'ny aterineto dia mora ary malalaka amin'ny fampiasana amin'ny iray amin'ireo aterineto karama ho an'ny fampiantranoana. Raha ilaina, dia afaka manamboatra tranokala matihanina amin'ny vidiny ambany. kitiho eto na ao amin'ny Logo an'ny Website raha mila fanazavana bebe kokoa.